ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို UN ကူညီရန် အစိုးရခွင့်မပြု | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ကချင်ပြည်နယ် တိုက်ပွဲများကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေသူများကို ကမ္ဘာ့ကုလ သမဂ္ဂ (UN) မှ အကူအညီပေးလို သော်လည်း မြန်မာအစိုးရက လုံခြုံရေး အခြေအနေအရ ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
“UN ဟာ လုံခြုံရေး ကင်းမဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒီထက်လုံခြုံရေး ကင်းမဲ့တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကူအညီတွေ အလွန်အမင်း လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေကို သွားရောက်ကူညီနိုင်ဖို့ အစိုးရကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းထားပါတယ်” ဟု ကုလသမဂ္ဂ ဒုတိယ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဗယ်လာရီအေး မို့စ်က ရန်ကုန်မြို့ ထရိတ်ဒါး ဟိုတယ်တွင် သတင်းထောက်များနှင့် ယနေ့ တွေ့ဆုံ စဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။
KIA နှင့် မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်တို့ အကြား စစ်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေသည်မှာ ၁ နှစ်ကျော် ကြာမြင့် ခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ကချင်ပြည်သူ ၁ သိန်းနီးပါး နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရသည်။ KIA ထိန်းချုပ်ထား သည့် ဒေသများအတွင်းရှိ နေရပ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေး ဒုက္ခသည်များသည် အစားအသောက် လိုအပ် ချက်၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းသာ အကူအညီရရှိနေကြောင်း ကချင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့က ပြီးခဲ့ သည့် အောက် တိုဘာလအတွင်း စစ်တမ်းကောက်ယူ သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
“ပြည်တွင်း NGO တွေကနေ တဆင့် ဒုက္ခသည်တွေဆီ အထောက်အပံ့တွေ ရအောင် လုပ်ပေး တာမျိုး ကျမတို့ လုပ်ပေးပါမယ်။ လိုအပ်နေတာတွေက အများကြီး ဖြစ်တယ်။ အစိုးရ ဘက် က အကြောင်းပြန်ချက်ရတာနဲ့ UN အနေနဲ့ သွားနိုင်ဖို့ ကျမတို့ လုပ်ပါမယ်” ဟု ဗယ် လာရီအေး မို့စ်က ဆိုသည်။
အစိုးရတပ်မတော် ထိန်းချုပ်ဒေသရှိ ကချင်ဒုက္ခသည် စခန်းများကို ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့် ပြည်တွင်း အဖွဲ့အစည်းများ၊ UN နှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ က ထောက်ပံ့ လျှက်ရှိပြီး KIA ထိန်းချုပ်ဒေသဘက်တွင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများက ကူညီထောက်ပံ့လျှက်ရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ခက်ခဲသော ဒေသများရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှာ အကူအညီရရှိရန် ခက်ခဲလျှက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
This entry was posted on December 8, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မြန်မာ့ပြောင်းလဲမှု ဒေါ်စုအမြင်
ပေါက်တောမြို့နယ် အရေးပေါ်သတင်း →